Beledweyne oo laga mamnuucay gaadiidka leh murayada madow – Radio Muqdisho
Beledweyne oo laga mamnuucay gaadiidka leh murayada madow
Amarkan ka soo baxay maamulka magaalada baladweyne eek u aadan mamnuucista gaadiidka miraayadaha beensalka leh ee dhexmara magaalada ayaa looga gol leyahay sidii loo adkeyn lahaa maanaka magalada Baldweyne loogana hortago suuro galnimada in ay ku soo dhex dhuuntaan kooxaha argigixsada.
Taliyaha ciidanka poliska ee degmada beledweyne korneyl cali dhuux mahad alle oo lahadlay warbaahinta ayaa waxaa uu ka hadlay arimo dhow ah oo ay kamid tahay amaanka iyo howlgalo ka socda magaalada baladweyen
“beledweyne uu xasilon yahay ciidamada amniga waxay diyaar u yihiin in ay fuliyaan amarka dowlada waana in la’xakameeyaa cid kasta oo hub wata.
’’laga bilaabo manta mudo sadax maalmood kadib in aan la’ogaan doonin gaari murayadiisu bensal tahay waa in uusan jirin
cidii lagu helaana ciidamada amaanka waxay amar u qabaan in lasoo qabto si amaanka loo xaqiijiyo.
“waxaa sharci daro ah in layiraahdowaxaa xaafad kamid ah beledweyne laga furay saldhig polis dowladadhexe ma’oga taliska poliska soomaaliyed ma’oga marka uma dulqaadan karno waxaas iyo wax lamid ah.
Hadalka taliyaha ciidamada poliska ee degmada beledweyne ayaa waxaa uu imaanayaa iyadoo dhawaan lagu wado in magaalada beledweyne uu ka bilowdo shirka maamul u samaynta gobolada hiiraan iyo sh,dhexe.
Wasiir Diini: “Hawlgalka lagu Xoreeyey Baardheere, wuxuu hordhac u yahay Qabashada iyo Xasilinta goobaha ay ku hareen Al-Shabaab”
Jaamacadda City oo ogeysiis u direysa ardayda dugsiyada ka soo baxday.